Myanmar News Guide
BTS ရဲ့concert အတွက် ဂုဏ်ပြုပေးတဲ့အနေနဲ့ ခရမ်းနုရောင်တွေ ထွန်းလင်းခဲ့တဲ့ ဆိုးလ
Jun 25, 2019 KPOP
‘Ode to You’ world tour ပြုလုပ်တော့မယ့် Seventeen
Jun 25, 2019 Cele
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ တရားရင်ဆိုင်ရတော့မယ့် B.A.P အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Himchan
Jun 21, 2019 Cele
စစ်မှုထမ်းမသွားခင်မှာ တစ်ကိုယ်တော်သီချင်းထွက်ရှိဦးမယ့် EXO ရဲ့ D.O.
Jun 21, 2019 KPOP
တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်မှာ ရက်ပ်ပါ Beenzino နဲ့အတူပူးပေါင်းထားတဲ့ Baekhyun
Jun 20, 2019 Cele
EXO အဖွဲ့ဝင် Chanyeol ရဲ့ studio ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ sasaeng fan ၂ယောက်
အမျိုးသမီး CEO အသစ်ကို ကြေညာလိုက်တဲ့ YG
ရှောင်မီက ကိုယ်ပိုင် – ရှောင်မီ RedMi ကားကို စတင်ထုတ်လုပ်
နိုင်ငံပေါင်း ၂၈နိုင်ငံက iTunes album chart တွေရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေတဲ့ Red Velvet
ဂျပန် ကားကုမ္ပဏီ တိုယိုတာက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကားထုတ်လုပ်ရန် ကန်ဒေါ်လာ ၅၂ သန်းကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်
ဇူလိုင် ၁ရက်နေ့မှာ စစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးမယ့် Kim Soo Hyun
ပုခုံးဒဏ်ရာကြောင့် အနည်းငယ်ခက်ခဲနိုင်ပေမယ့် စစ်မှုထမ်းသွားရတော့မယ့် B1A4 ရဲ့ Jinyoung
ဆိုးလ်မြို့ရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာ ခရမ်းနုရောင်တွေ ထွန်းလင်းပြီး BTS အတွက်ဂုဏ်ပြုပေး ခဲ့ကြပါတယ်။ ဇွန်လ ၂၂ရက်နေ့က Olympic Gymnastics Arena မှာပြုလုပ်တဲ့ BTS ရဲ့ Seoul concert ကိုဂုဏ်ပြုဖို့အတွက် ဆိုးလ်မြို့ရဲ့နေရာ တစ်ချို့မှာ ခရမ်းနုရောင်တွေ ထွန်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ Lotte World Tower နဲ့ N Seoul Tower တွေမှာ ဇွန်လ ၂၁ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၂၃ရက်နေ့အထိ ခရမ်းနုရောင်တွေ ဖုံးလွှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဆောက်အုံတွေဟာ မြင်ကွင်း ရှင်းလင်းပြီး လှပတဲ့နေရာတွေပါ။ ကဲ..အောက်မှာရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကိုခံစားကြည့်ရှုလို့ရပါပြီနော်… Snow/MNG #MNG
Jun 25, 2019 by admin in News
Seventeen အဖွဲ့ဟာ ဆိုးလ်မြို့မှာပြုလုပ်မယ့် world tour အသစ် ‘Ode to You’ ကို တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒီ tour ကို ဩဂုတ် လ ၃၀ရက်နေ့ ၊ ၃၁ရက်နေ့ နဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁ရက်နေ့တွေမှာ ဆိုးလ်မြို့မှာပြုလုပ်မယ့် concert တွေနဲ့ စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ world tour ဟာ Seventeen ရဲ့ ၂၀၁၇ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ‘Diamond Edge’ ပြီးနောက် ပထမဆုံးပြန်လည်ပြုလုပ်မယ့် tour ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေလည်း ပျော်ရွှင်နေကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းတွေကိုလည်း စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်။ Snow /
Jun 25, 2019 by admin in KPOP
B.A.P ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Himchan စွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု စွဲဆိုချက်ဟာ တရားခွင်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Himchan ဟာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် မနှစ်က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ခံယူခဲ့ရပြီး ဒီနှစ်ရဲ့ ဧပြီလက သက်ဆိုင်ရာရဲဌာနမှ Himchanကို စွဲချက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ Himchan ဟာ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၄ရက်က Gyeonggi ပြည်နယ်မှာ အမျိုးသား ၃ယောက် နဲ့ အမျိုးသမီး ၃ယောက်တို့ ပျော်ပွဲစားထွက်ခဲ့တဲ့အတောတွင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီပြဿ. ကြောင့် တရားစွဲခံရတာပါ။ ပျော်ပွဲစားမှာ သောက်စားခဲ့ကြပြီးနောက် အမျိုးသမီး ‘A’ က Himchan ဟာ သူ့ကို လိင်အကြမ်းဖက်ခဲ့တယ်လို့
Jun 25, 2019 by admin in Cele
EXO ရဲ့အဖွဲဝင် D.O. ဟာ စစ်မှုထမ်းမသွားခင်မှာ တစ်ကိုယ်တော်သီချင်းတစ်ပုဒ် ထွက်ရှိဦးမှာပါ။ D.O. ရဲ့တစ်ကိုယ်တော်သီချင်းဟာ SM ကုမ္ပဏီရဲ့ ‘SM Station’ ကနေ ထွက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့ကသိရပါတယ်။ စစ်မှုထမ်းသွားဖို့အတည်ပြုထားတဲ့ ဇူလိုင် ၁ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာ သီချင်းကို ဖြန့်ချီမှာဖြစ်ပါတယ်။ D.O. ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ တစ်ကိုယ်တော်သီချင်းကတော့ သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကထွက်ရှိတဲ့ ‘Cart’ ရုပ်ရှင်အတွက် သီဆိုထားတဲ့ OST “Crying Out” ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင် Xiumin ဟာမေလမှာ စတင်စစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီး D.O. ဟာ စစ်မှုထမ်းသွားမယ့် EXO အဖွဲ့ဝင်တွေထဲ
Jun 21, 2019 by admin in Cele
K-Pop ရက်ပ်ပါ Beenzino ဟာ EXO ရဲ့အဖွဲ့ဝင် Baekhyun နဲ့အတူ ဂီတပူးပေါင်းဖန်တီးမှုတွေ ပြုလုပ်မယ့် နောက်ထပ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဇွန်လ ၂၁ရက်နေ့က သတင်းတွေအရ ရက်ပ်ပါ Beenzino ဟာ Baekhyun ရဲ့ ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ် “City Lights” မှာ featuring အနေနဲ့ပါဝင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ Baekhyun ဟာ Suzy နဲ့ “Dream” သီချင်း ၊ K.Will နဲ့ “The Day” ၊ Soyou နဲ့ “Rain” ၊ Loco နဲ့ “YOUNG”
Jun 21, 2019 by admin in KPOP
ဇွန်လ ၂၁ရက်နေ့မှာ SM ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးမှ EXO အဖွဲ့ဝင် Chanyeol ရဲ့အိမ်ကို တရုတ်အမျိုးသမီး sasaeng fan နှစ်ယောက် ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြေညာ ချက်တစ်ခုထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ sasaeng fan ဆိုတာ idol တွေအပေါ် အလွန်အမင်းစွဲလမ်းပြီး idol တွေရဲ့ အသက်အန္တရယ်ကို ထိခိုက်စေလောက်တဲ့အထိတောင် နှောက်ယှက်တတ်ကြတဲ့သူတွေပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ဧပြီလက တရုတ်အမျိုးသမီး sasaeng fan ၂ယောက်ဟာ Yeoksam-dong, Gangnam မှာရှိတဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Chanyeol ရဲ့ studio ခန်းထဲကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန် studio ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့
Jun 20, 2019 by admin in Cele
LV ရဲ့ရှိုးပွဲမှာ runway model တစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြန်တဲ့ Song Min Ho
အရည်အချင်းမျိုးစုံရှိကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို ပရိသတ်တိုင်းက ချစ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအနုပညာရှင်တွေထဲမှာ WINNER ရဲ့အဖွဲ့ဝင် Song Min Ho လည်းအပါအဝင်ပါပဲ။ Song Min Ho ဟာ အနုပညာနယ်ပယ်မျိုးစုံမှာ အရည်အချင်းရှိသူတစ်ယောက်ဆိုတာကို ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ K-Pop ရက်ပ်ပါတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Song Min Ho ဟာ ပဲရစ်မြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ Louis Vuitton’s Spring 💓Menswear Show မှာ runway model တစ်ယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နွေဦးရာသီရဲ့အငွေ့အသက်တွေကို ခံစားမိစေတဲ့ ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ အရောင်အသွေးစုံစွာလှပနေတဲ့ ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ Song Min Ho ကို runway
Red Velvet အဖွဲ့ရဲ့ comeback အယ်လ်ဘမ် ‘The ReVe Festival Day 1’ ဟာ ထွက်ရှိပြီးချက်ချင်းမှာပဲ နိုင်ငံပေါင်း ၂၈ နိုင်ငံက iTunes album chart တွေရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာရပ် တည်ခဲ့ပါ တယ်။ ဇွန်လ ၂၀ရက်နေ့က SM မှပြောကြားချက်အရ အမေရိကန် ၊ ကနေဒါ ၊ ဘရာဇီး ၊ ကိုစတာရီကာ ၊ ဖင်လန် ၊ ဂရိ ၊ ပေါ်တူဂီ ၊ ရိုမေးနီးယား ၊ နယူးဇီလန် ၊ ပိုလန်
Jun 20, 2019 by admin in KPOP
2019 Teen Choice Awards ပွဲမှာ ဆန်ကာတင်ဝင်နေတဲ့ EXO, BTS, BLACKPINK နဲ့ NCT 127
ဇွန်လ ၁၉ရက်နေ့မှာ EXO, BTS, BLACKPINK နဲ့ NCT 127 တို့ ဟာ 2019 Teen Choice Awards ပွဲရဲ့ ‘Choice International Artist’ category အတွက် ဆန်ကာတင်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ BTS ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်အတွက် ဒီဆုကို ရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ BTS ရဲ့ Halsey နဲ့အတူပူးပေါင်းထားတဲ့ “Boy With Luv” သီချင်းဟာ ‘Choice Collaboration” category အတွက် ဆန်ကာတင်ဝင် ထားပါတယ်။ BLACKPINK ရဲ့ “DDU-DU DUU-DU”
YG ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီမှ အမျိုးသမီး CEO အသစ်ကို ကြေညာခဲ့ပါပြီ။ CEO Yang Min Suk ဟာ သူ့ရဲ့အစ်ကိုဖြစ်တဲ့ CEO ဟောင်း Yang Hyun Suk အေဂျင်စီရဲ့ရာထူးတွေ မှနှုတ်ထွက် သွားပြီးမကြာ ခင်ပဲ ဇွန်လ ၁၄ရက်နေ့က CEO ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဇွန်လ ၂၀ရက်နေ့မှာတော့ YG ရဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ Hwang Bo Kyung ကို CEO အသစ်အဖြစ် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Hwang Bo Kyung ဟာ YG ကို ၂၀၀၁ခုနှစ်ကရောက်ရှိခဲ့ပြီး အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ နဲ့
Jun 20, 2019 by admin in Business
Myanmar News Guide Copyright 2019 myanmarnewsguide.com. All rights reserved.